Zaw Wai, Author at Factcrescendo Myanmar
Author: Zaw Wai
April 27, 2020 April 28, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်ဟာ ဝူဟန်ဓာတ်ခွဲခန်းကလုပ်တာလို့ နိုဗယ်ဆုရ ဂျပန်ဇီဝကမ္မ ဗေဒပါမောက္ခ Tasuku Honjoကပြောတယ်ဆိုတဲ့ သတင်းတု
ဂျပန်ဇီဝကမ္မဗေဒသို့မဟုတ်ဆေးပညာပါမောက္ခဒေါက်တာ Tasuku Honjo ဟာကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်က “သဘာဝ မဟုတ်သောအရာ”လို့ ယနေ့မီဒီယာများရှေ့တွင်ဖွင့်ဟခဲ့တယ်ဆိုတဲ့ ပို့စ်တစ်ခု ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးစွဲသူ တွေအကြားမှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အောက်ပါစာသားတွေကတော့ လူမှုကွန်ယက်သုံးစွဲသူတွေမျှဝေထားတဲ့ ပို့စ်ထဲက ကောက်နှုတ်ထား တဲ့စားသားအချို့ဖြစ်ပါတယ်။ “အကယ်၍သာ ၎င်းသည်သဘာဝအတိုင်းဖြစ်ပေါ်လာသည်ဆိုပါက ကမ္ဘာတစ်ခုလုံးကိုဆိုးဆိုးရွားရွားထိခိုက်လိမ့် မည်မဟုတ်ပါ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ နိုင်ငံများတွင် အပူချိန်များသည် ကွဲပြားခြားနားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ အကယ်၍သာ ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည် သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်လာပါက တရုတ်နိုင်ငံနှင့်အပူချိန်တူသော နိုင်ငံများ ကိုသာ ထိခိုက်ပေလိမ့်မည်။ ၎င်းအစား ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံကဲ့သို့သော နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်၊ သဲကန္တာရ ဒေသများတွင်ပျံ့နှံ့နေသည်။ ၎င်းသည်သဘာဝအလျှောက်ဖြစ်ပေါ်ခဲ့လျှင် ၎င်းသည်အအေးခန်းများ တွင်ပျံ့နှံ့သွား သော်လည်းပူသောနေရာများတွင်သေဆုံးသွားပေမည်။ကျွန်တော်သည်နှစ်ပေါင်း 40ကြာသည့်တိုင်အောင် တိရိစ္ဆာန်များနှင့်ဗိုင်းရပ်စ်များအပေါ်သုတေသနပြုခဲ့ပြီးပါပြီ။ ဒါဟာ သဘာဝမဟုတ်ပါဘူး။ ၎င်းဗိုင်းရပ်စ်သည် ဓာတ်ခွဲခန်းမှထုတ်လုပ်ထားပြီး လူများဖန်တီးလိုက်သောဗိုင်းရပ်စ်အတုသာလျှင် ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်တော်သည် တရုတ်နိုင်ငံရှိ Wuhan ဓာတ်ခွဲခန်းတွင် ၄ နှစ်ကြာအောင် အလုပ်လုပ်ခဲ့ပါသည်။” […]
April 25, 2020 April 25, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on နီပေါပြည်တွင်းစစ်တုန်းက ဗွီဒီယိုကို တပ်မတော်နှင့် AA တိုက်ပွဲမြင်ကွင်းလို့ဖော်ပြနေတဲ့ ဗွီဒီယိုသတင်းမှား
April 25, 2020 April 25, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on ဖုန်းနံပါတ်သာပေး ဆန် ဆီ ကြက်သွန်တွေကို ကားနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေးဝေမယ့် သူဌေးကြီး လင်မယားဆိုတဲ့ သတင်းတု
Covid-19 ရောဂါ ရှိမရှိ အမြန်စစ်ပေးနိုင်တဲ့ Roche Cobas 6800 Analyzer စက်လှူဒါန်းခဲ့တဲ့ AA Medical Product ကုမ္ပဏီပိုင်ရှင်ဟာ ပြီးခဲ့တဲ့ရက်တွေအတွင်းမှာ သူတို့ရဲ့ ဒီလိုအလှူကြောင့် လူမှုကွန်ယက်မှာ နာမည် ကြီးနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ“သင့်ရဲ့ share တစ်ခုက အဆင်မပြေသူမိသားစုများအတွက်ကုသိုလ်ဖြစ်စေနိုင် ပါတယ်…မြန်မာပြည်မှာ ဘယ်နေရာမာပဲနေ နေ ဖုန်းနံပါတ်သာပေး ဆန် ဆီ ကြက်သွန်များကို ကားနဲ့ကိုယ်တိုင်ပေးဝေလှူဒါန်းမည့် သူဌေးကြီးလင်မယား….လေးစားစရာပါ…သတင်းအပြည့်အစုံ”ဆိုပြီးတော့ neomyanmar အမည်နဲ့ ဝက်ဘ် ဆိုဒ်မှာရေးသားထားတဲ့ သတင်းကို Modori Mitsuke အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ် သုံးစွဲသူက “သတင်းစုံ” အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စု၊ “ရန် နိုင် သိန်း”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူက “မှု့ခင်းနှင့်သတင်းစုံ” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုမှာ မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Mandalay Daily အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာလည်း အလားတူဖော်ပြထား တာတွေ့ရပါတယ်။ […]
April 24, 2020 April 25, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on ထိုင်းမှာ COVID-19 နောက်ဆက်တွဲပြဿနာကြောင့် လင်မယားနှစ်ယောက်ကြိုးဆွဲချ သေခဲ့တာလား… အမှန်က ဒီလိုပါ
April 23, 2020 April 23, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on ခရစ်ယာန်မိန်းကလေးတွေ ဆရာဒေးဗစ်လားပုံတွေကို ကိုင်ပြီးမျက်ရည်ကြီးငယ် ကျနေတာလား…မဟုတ်ပါ…အမှန်က ဒီလိုပါ
COVID-19 ရောဂါးကူးစက်ခံရအပြီးမှာ အငြင်းပွားဖွယ်ရာဟောပြောချက်တွေကြောင့် လူမှုကွန်ယက် သုံးစွဲသူတွေ အကြားမှာ တမုတ်ချင်းနာမည်ကြီးလာသလို သူဉီးဆောင်ကျင်းပခဲ့တဲ့ ဘာသာရေး အခမ်း အနားတစ်ခုကြောင့် အခြားသူတွေပါ ကူးစက်ခံရခဲ့ရပြီးနောက် ကူးစက်ရောဂါများကာကွယ်နှိမ်နင်းရေး ဉပဒေနဲ့အမှုဖွင့်အရေးယူခံ ထားရတဲ့ ခရစ်ယာန်တရားဟောဆရာဒေးဗစ်လားနဲ့ ပတ်သက်တဲ့သတင်းတွေဟာ လူမှုကွန်ယက်မှာ ရေပန်းစားနေပါတယ်။ ဒီလိုအခြေအနေမျိုးမှာ “အခု ဝေဘါဂီဆေးရုံရှေ့မှာ ခရစ်ယာန် မိန်းကလေးတွေ ဆရာဒေးဗစ်လား ပုံတွေကို ကိုင်ပြီးမျက်ရည်ကြီးငယ်ကျပြီး ငိုနေကြတယ် ကိုယ်တို့ယုံကြည်သူတွေလဲ စိတ်ပူလို့ စုံစမ်းကြည့်တာပေါ့ အားလုံး ပဲ ဘုရားသခင်ဆီမှာ ဆုတောင်း ပေးကြပါ ဆရာဒေးဗစ်လား အသက်ရှုရတာ အရမ်းအခက်အခဲ ဖြစ်နေပါတယ် လည်ချောင်းကို ဖောက်ပြီး အသက်ရှုပိုက် သွင်းထားရပါတယ် ခုအချိန်မှာ ဘာသာခြားတွေနဲ့ ငြင်းခုန် ရန်ဖြစ်နေ မယ့်အစား ဆရာဒေးဗစ်လား အတွက် ဆုတောင်းပေးကြရအောင်လား ယုံကြည်သူအပေါင်းတို့ God […]
April 23, 2020 April 23, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on အိပ်ယာထဲလှဲနေတဲ့ အဖိုးအား ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုး ဖြစ်လို့ ရိုက်သတ်လိုက်သတဲ့လား.. အမှန်က ဒီလိုပါ
April 22, 2020 April 22, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on ၂၀၁၁ ခုနှစ်ကဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့ ဆူနာမီကို သူတို့အိမ်တွေအတွက် ဆုတောင်ပေးပါဉီးဆိုပြီး ထုတ်လွှင့်နေတဲ့ Facebook Live အကြောင်း
ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူတွေအကြားမှာ “ဂျပန်နိုင်ငံမှာ tsunami ၊ သူတို့အိမ်ကို ဆုတောင်းပေးကြပါ ။ ဘုရားရေ!! “လို့ မြန်မာလို ပြန်ဆိုနိုင်တဲ့ “Tsunami in Japan, pray Them Home. OMG!!”ဆိုပြီး မူရင်းအင်္ဂလိပ်လိုရေးသားပြီး မျှဝေထားတဲ့ ဂျပန်နိုင်ငံက ဆူနာမီ Facebook live ဗွီဒီယိုကို ပြန်လည်မျှဝေနေကြတာတွေ့ရပါတယ်။ “Debimlivinglifemoore”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက Facebook live ဗွီဒီယိုကို ထုတ်လွှင့်ခဲ့ရာမှာ “Moe Htet”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူက “သတင္းစုံ(NEWS)”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုထဲမှာ ပြန်လည်မျှဝေ ထားပါတယ်။အလားတူပဲ “Aungsan Aungsan”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူက “မျမန္မာ့ သတင္းစံု” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုထဲမှာ ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ Fb link Fb link Archive link Archive link “Debimlivinglifemoore” အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်စာမျက်နှာက ၇ နာရီခွဲကျော်ကြာမြင့်တဲ့ […]
April 22, 2020 April 22, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on အီရန်နိုင်ငံမှာ Covid-19 ရောဂါကြောင့်လူတွေသေတာ မြှုပ်လို့မနိုင်တော့လို့ လမ်းပေါ်ထွက် ဆန္ဒပြကုန်ပြီဆိုတဲ့သတင်းမှား
April 21, 2020 April 21, 2020 Zaw WaiLeaveaComment on Mask အဟောင်းတွေကို ဈေးကွက်ထဲသို့ရောင်းဝယ်နေမှုအထူးသတိပြုပါဆိုတဲ့ ပို့စ်မှာ ပါတဲ့ ဓာတ်ပုံတွေက မြန်မာနိုင်ငံက မဟုတ်ပါ
“ယခုဖြစ်ပေါ်နေသော ကမ္ဘာ့ကပ်ရောဂါ COVID-19 ရောဂါပိုးပြန့်ပွားနေမှု့ကို အကြောင်းခံပြီး မြန်မာနိုင်ငံရှိ ပြည်သူများကို လိမ်ညာရောင်းနေကြသည့် Mask များသည် အများပြည်သူများ ဝယ်ယူတပ်ဆင်ထားပြီးသော Mask အဟောင်းများကို ပြန်လည်ကောက်ယူကာ လျှော်ဖွတ်၍ အသစ်ပုံစံအတိုင်း ပြုလုပ်ပြီး ဈေးကွက်ထဲသို့ ဈေးပေါပေါဖြစ် ဖြန့်ချီးရောင်းဝယ်နေတာတွေ ရှိနေပါတယ်။ ၎င်းပြန့်ချီးရောင်းဝယ်နေသော Mask အဟောင်း များသည် အများပြည်သူများထံ ပြန်လည်းရောက်ရှိကာ COVID-19 ရောဂါပိုးမကူးဆက် နိုင်ရန်အတွက်၎င်း ၊ မျက်နှာပေါ်သို့ ကာကွယ်ထိန်းချုပ်ရန်အတွက်၎င်း ၊ တပ်ဆင်ရာတွင် ပုံပါအတိုင်း မျက်နှာပေါ်ရှိ အရည်ပြားများ ပျက်စီးဆုံးရှုးမှုနဲ့ တွေ့ကြုံရပါသည်”ဆိုတဲ့ ပို့စ် လူမှုကွန်ယက်မှာ ပျံ့နှံ့ခဲ့ပါတယ်။ “ပန်းနုရောင်ကောင်မလေး ပန်းနုရောင်ကောင်မလေး”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူက “မြန်မာသတင်းစုံ”အမည်နဲ့ ဖေ့စ်ဘွတ်အုပ်စုထဲကို “မေ သူ”အမည်နဲ့ဖေ့စ်ဘွတ်သုံးစွဲသူရဲ့ပို့စ်ကို ပြန်လည်မျှဝေထားတာတွေ့ရပါတယ်။ ဒီပို့စ်ကို “မေ သူ”က “ဝူဟန်/ကိုရိုနာဗိုင်းရပ်စ်COVID-19 […]
Fact Check: အမေရိကန်သံရုံးက အဖမ်းခံရတဲ့သူတွေကို လိုက်ထုတ်ပေးနေ သလား-မဟုတ်ပါ ပိတ်မိနေသူတွေ ဒါမှမဟုတ်လည်း ဖမ်းခံရသူတွေကို မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာအမေရိကန်သံရုံးကလိုက်ထ... by နေရာမောင်